Ku saabsan AngelBiss
Alaabada & Codsiga
Mashiinka Nuujinta Guriga Isticmaal
Mashiinka Nuugista Isticmaalka Caafimaadka
Teknolojiyada & Adeegga
Teknolojiyada & Waxsoosaarka
Adeegyada & Dammaanadda
Warar & Daabacaad
Angelbiss waxay si guul leh u diiwaangelisay summad ganacsi oo Mareykan ah
Waqtiga dhejinta: 02-23-2021
Angelbiss maahan kaliya sumcad caan ka ah adduunka laakiin sidoo kale waa astaan ​​mas'uul ah. Waxaan u dhexeynaa inaan helno cilmi baaris madax-bannaan iyo alaab tiknoolajiyad horumarineed si aan u helno aqoonsi dhan walba ah. Tani waa geedi socod si joogto ah kor loogu qaadayo tayada wax soo saarkooda. Dhawaan, Angelbiss ayaa soo gelisay ...Akhri wax dheeraad ah »
Ku habboonaanta Mashiinka nuugista la qaadan karo (AC, DC, baytariyada)
Waqtiga dhejinta: 02-14-2021
Angelbiss waxay soo saartay Mashiinka nuugista ee la qaadan karo (AC, DC, baytariyada): AVERLAST 25B. Ma aha oo kaliya faa'iidooyinka ay leedahay Angelbiss laba qalab oo kale oo mishiinka nuugista ah: nidaamka kahortagga qulqulka kahortagga, nidaamka dhalada si toos ah loogu xidho, kaliya hal riix si loo qaado awooda dhalada 1400ml ...Akhri wax dheeraad ah »
Angelbiss waxay si guul leh u diiwaangelisay summad ganacsi oo Jarmal ah
Waqtiga dhejinta: 02-07-2021
Angelbiss maahan kaliya sumcad caan ka ah adduunka laakiin sidoo kale waa astaan ​​mas'uul ah. Laga soo bilaabo cilmi-baaristayada iyo horumarinta alaabooyinka farsamada, si loo aqoonsado dhammaan dhinacyada. Tani waa geedi socod si joogto ah kor loogu qaadayo tayada wax soo saarkooda. Waxaan ixtiraamnaa oo daryeelnaa abuure kasta iyo R&D p ...Akhri wax dheeraad ah »
Waxaa la aasaasay koox ka wada hadasha badbaadada dhaliyaha oksijiin
Waqtiga boostada: 01-27-2021
2020.11.05, Angelbiss wuxuu aasaasay koox kahadasha guuldarooyinka amniga ee barxada bulshada ee Facebook. Maxay tahay sababta aan ugu dhiseyno koox wada hadal ah oo ku saabsan guul darrooyinka amniga ee dhaliyaha oksijiin? Sababtoo ah markii macaamiisheena ugu dambeeya ay helaan sheyga, hel dhibaato ama ganacsade la kulmo pro aan xal lahayn ...Akhri wax dheeraad ah »
Kaydinta oksijiin la qaadi karo oo loo isticmaali karo plateau?
Waqtiga dhejinta: 01-17-2021
Angelbiss isku-uruuriyaha oksijiinta la qaadi karo wuxuu ku socon karaa 15,000 cagood. Si loo caddeeyo in Angelbiss qalabka wax lagu ururiyo ee oksijiin la qaadan karo ay u isticmaali karaan macaamiisha ku nool meelaha joogoodu sarreeyo. 2018, kooxda Angelbiss 'R & D waxay ku fidisay gobollo badan ilaa Potala Palace (15,000 feet) oo ku taal Tibet, Shiinaha. ...Akhri wax dheeraad ah »
Fariinta Sanadka Cusub ee AngelBiss COO
Waqtiga dhejinta: 01-06-2021
Waad salaaman tihiin wada-hawlgalayaasha qaaliga ah, Hambalyada ugu wanaagsan ee adiga iyo ganacsigeenna ah sannadka cusub ee 2021. Waxaan sidoo kale ku faraxsanahay inaan helno rabitaanka sannadka cusub ee kooxdeenna iyo ganacsigaba maalmihii la soo dhaafay. Waxaan ku kala aragti duwanaan karnaa qodobada qaarkood, laakiin bartilmaameedkeennu waa isku mid. Waxaan aaminsanahay labadeenaba inaan noqono guul weyn oo aan ka dhigno ...Akhri wax dheeraad ah »
FARXAD SANADKA CUSUB 2021 !!!!
Waqtiga dhejinta: 01-01-2021
2020 waa sanad qaas ah, sanadkaan waxaan la kulanay waxyaabo badan oo cajiib ah, COVID-19 wuxuu xaaqay aduunka, Kobe Bean Bryant wuxuu ka tagay aduunkan, banaanbaxyada rabshadaha ka dhanka ah waxay ku dhamaadeen rabshado, doorashooyinka guud ee Mareykanka, Brexit, iwm sanadka cusub ayaa soo socota, oo murugooyinka oo dhammuna tartiib bay u libdhi doonaan ...Akhri wax dheeraad ah »
0.1%, matoor oksijiin ah oo isbeddelkiisu yahay kaliya 0.1%
Waqtiga boostada: 12-20-2020
Ma ogtahay jiritaanka matoor oksijiin ah oo isbeddelkiisu yahay 0.1% oo keliya? AngelBiss waa koronto dhaliyaha ugu horreeya ee diiradda saaraya isbedbeddelka. Soo saaraha ugu horeeya ee matoorrada oksijiin ee xakamayn kara heerka isbedbeddelka gudaha 0.1%. ANGEL5S waa taxane dhaliyayaal oksijiin ah oo xasiloon ...Akhri wax dheeraad ah »
Kaliya lix maalmood, Buuxi 3 kumbiyuutarro 60LPM matoor oksijiin hyperbaric ah
Waqtiga boostada: 12-17-2020
Angelbiss 60LPM matoor oksijiin cadaadis sare leh ayaa ku siin kara oksijiin xarumo caafimaad oo yaryar. Marka la barbardhigo silsiladaha oksijiinta caadiga ah, matoorka ogsijiin ee loo yaqaan 'Angelbiss oxygen' ayaa ka ammaan iyo aamin badan. Isla mar ahaantaana, matooriyaha ogsijiin ee loo yaqaan 'Angelbiss oxygen' wuxuu yareyn karaa qiimaha, wuxuu yareyn karaa cadaadiska wuxuuna la kulmi karaa ...Akhri wax dheeraad ah »
Angelbiss waxay si guul leh uga diiwaan galisay summad ganacsi dalka Malaysia
Waqtiga boostada: 12-15-2020
Dhawaan, Angelbiss waxay si guul leh uga diiwaangalisay calaamado ganacsi Malaysia. Sababtoo ah Angelbiss waa cilmi baaris madax-bannaan iyo astaan ​​horumarineed oo dhab ah oo masuul ah, daryeela oo ixtiraam uunka. Si loo ilaaliyo xuquuqda iyo danaha kala duwan ee macaamiisheena, loona ilaaliyo positiv ...Akhri wax dheeraad ah »
Guusha AngelBiss lagu sameeyay 2019
Waqtiga dhejinta: 08-19-2020
Teknoolojiyadda No.1-In ka badan 18 diiwaangelinta rukhsadaha cusub ee qalabka oksijiinta iyo mishiinka nuugista No.2-Batarigii ugu horreeyay ee adduunka ee dib u soo celiya 5L Oxygen Concentrator wuxuu gaaraa 93% No.3-Tijaabinta 5L oxygen concentrator ee Tibet 15000ft wuxuu gaarayaa 93% No.4 Mashiinka nuugista ee dib loo soo celin karo ee ka sarreeya 3hours No.5-20psi pre ...Akhri wax dheeraad ah »
Waxaan ugu hambalyeynayaa AngelBiss helitaanka laba shati oo dheeri ah
Waqtiga dhejinta: 08-06-2020
Dhawaan, AngelBiss waxay heshay laba shati oo nooca korontada loo adeegsado ah oo uu oggolaaday Xafiiska Hantida Maskaxda ee Shiinaha. Shahaadooyinka cusub ee la helay markan waxay si buuxda uga tarjumayaan awoodda iyo awoodda hal-abuurnimo ee kooxda cilmi-baarista iyo horumarinta ee AngelBiss, waxayna door muhiim ah ka qaadataa sii kordhinta ...Akhri wax dheeraad ah »
Shirkadda 'AngelBiss Medical Technology Co., Ltd,
No.106, Wadada Shuanghe, Magaalada Dianshanhu, 215345, Shanghai, Shiinaha
Angelbiss wuxuu si guul leh u diiwaangaliyay US tr ...
Angelbiss maahan kaliya sumcad caan ka ah adduunka laakiin sidoo kale waa astaan ​​mas'uul ah. Waxaan u dhexeynaa inaan helno cilmi baaris madax-bannaan iyo alaab tiknoolajiyad horumarineed si aan u helno aqoonsi dhan walba ah. Tani waa geeddi-socod ...
Ku habboonaanta nudaha la qaadan karo ee la qaadan karo ...
Angelbiss waxay soo saartay Mashiinka nuugista ee la qaadan karo (AC, DC, baytariyada): AVERLAST 25B. Kaliya maahan faa iidooyinka ay leedahay Angelbiss labo qalab oo kale oo Mashiinka Mashiinka ah: Nidaamka ilaalinta kahortagga qulqulka badan ...
Angelbiss wuxuu si guul leh u diiwaangaliyay Germa ...
Angelbiss maahan kaliya sumcad caan ka ah adduunka laakiin sidoo kale waa astaan ​​mas'uul ah. Laga soo bilaabo cilmi-baaristayada iyo horumarinta alaabooyinka farsamada, si loo aqoonsado dhammaan dhinacyada. Tani waa geeddi-socod lagu hagaajinayo ...
La aasaasay fayo-dhaliyaha badbaadada oksijiinta ...
2020.11.05, Angelbiss wuxuu aasaasay koox kahadasha guuldarooyinka amniga ee barxada bulshada ee Facebook. Maxay tahay sababta aan ugu dhiseyno koox wada hadal ah oo ku saabsan guul darrooyinka amniga ee dhaliyaha oksijiin? Sababtoo ah markii macaamiisheena dhammaadka ...
Isku-uruuriyaha oksijiinta la qaadi karo ee b ...
Angelbiss isku-uruuriyaha oksijiinta la qaadi karo wuxuu ku socon karaa 15,000 cagood. Si loo caddeeyo in Angelbiss qalabka wax lagu ururiyo ee oksijiin la qaadan karo ay u isticmaali karaan macaamiisha ku nool meelaha joogoodu sarreeyo. 2018, Angelbiss 'kooxda R&D sp ...
Waad salaaman tihiin wada-hawlgalayaasha qaaliga ah, Hambalyada ugu wanaagsan ee adiga iyo ganacsigeenna ah sannadka cusub ee 2021. Waxaan sidoo kale ku faraxsanahay inaan helno rabitaanka sannadka cusub ee kooxdeenna iyo ganacsigaba maalmihii la soo dhaafay. Waxaan ku kala aragti duwanaan karnaa qodobada qaarkood ...
2020 waa sanad qaas ah, sanadkan waxaan la kulanay waxyaabo badan oo cajiib ah, COVID-19 wuxuu xaaqay adduunka, Kobe Bean Bryant wuxuu ka tagay aduunkan, banaanbaxyada rabshadaha ka dhanka ah waxay ku dhamaadeen rabshado, doorashooyinka guud ee Mareykanka, ...